အီတလီနိုင်ငံမှ အ၀တ်အစားကုမ္မဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘီနက်တန် ကုမ္မဏီ၏ဟာ ၎င်း၏ " အမုန်းတရားများ
သင်ပုန်းချေပါစေ" ဟူသော ငြိမ်းချမ်းရေးလှုံ့ ဆော်ချက်အဖြစ် ကြေငြာခဲ့ သည့် ကြေငြာကားချပ်ပုံရိပ်များ
ထဲမှ တစ်ခုကိုတော့ အရှက်ရစွာဖြင့် ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ ရပါတယ်...
အီတလီကုမ္မဏီဟာ ပုရဟန်းမင်းကြီး ဘီနီဒစ်တ် နှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ မွတ်ဆလင်တရားဟောဆရာဘာသာ
ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတို့ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ ကာ အနမ်းဖြင့် နှုတ်ဆက်နေပုံအား ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင်
ရုံးစိုက်ရာ ဗာတီကန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ မှ လက်မခံနိုင်လောက်သော လှုံ့ ဆော်မှုဟု ရှုံ့ ချခဲ့ သဖြင့် ဖိုတိုရှော့ 
ဖြင့် အစွမ်းပြဖန်တီးထားသည့် ထိုပုံအားပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ ရပါတယ်...
ဘီနက်တန်ကတော့ ၎င်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ သည့် လှုံ့ ဆော်မှုဟာ အမုန်းတရားများပပျောက်ရေးအတွက်ဟု အ
ခိုင်အမာဆိုခဲ့ ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခွင့် လွှတ်သည်းခံမှုနှင့် မေတ္တာတရားများပွားများရေးအတွက်ရည်ရွယ်
ခဲ့ ပေမယ့် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ထိုအပြုအမူကြောင့် တန်ပြန်ရိုက်ခတ်ဆန့် ကျင်မှုများ၊ ပြဿများ ဖြစ်ပွားလာ
နိုင်မှုအပေါ် သိရှိထားသင့် ခဲ့ ပါတယ်လို့ လည်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုပိုစတာများတွင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံကြီးများ၏ခေါင်းဆောင်ခြောက်ဦးခန့် အားလည်း အချင်း
ချင်း နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ ကာ နမ်းရှုတ်နှုတ်ဆက်နေပုံကို ဖိုတိုရှော့ နည်းပညာဖြင့် ပြုပြင်ဖန်တီးထားသည်
ဘယ်လိုပဲ ဦးတည်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်တွေကောင်းတယ်လို့ ဆိုဆို ဒါကိုတော့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး လို့ 
ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင် ရုံးစိုက်ရာ ဗာတီကန် ကဆိုပါတယ်...
Controversial: This mocked-up image of the Pope embracing Ahmed Mohamed el-Tayeb as part of Benetton's new advertising campaign has been called 'totally unacceptable' by the Vatican
ငြိုးသူ၇န်ဘက်နှစ်ယောက် အခုလိုချစ်ကြည်မွေ့ နေတာကတော့ လွန်တယ်ပေါ့ ...နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ
တွေကိုဒီလိုမလုပ်သင့် ဘူးပေါ့ ...
Edgy: Benetton's Unhate Campaign includes this picture of U.S. President Barack Obama and Venezuelan President Hugo Chavez kissing
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ကရန်သူတော် ဗင်နီးဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင် ဟူဂိုချေဗက်၊
အစ္စရေးဝန်ကြီးချူပ် ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟု က ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင် သမ္မတ မာမွတ်အဘတ်စ်၊
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်အီဆွန်းက တောင်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် လီမြွန်ဘက် တို့ အား အ
ချင်းချင်း နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ ကာ နမ်းရှုတ်နှုတ်ဆက်နေသည့် ပိုစတာများ ဖြန့် ချီခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဂျာမန်ဝန်ကြီးချူပ် အိန်ဂျယ်လာမာကယ် ကတော့ ဥရောပတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကြပ်
အတည်း၊ အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်နေမှုကို ဖြေရှင်းနေခဲ့ ရာမှ ခေတ္တအချိန်ယူကာ ပြင်သစ်သမ္မတ နီကိုလပ်စ် ဆာ
ကိုဇီ နဲ့ အနမ်းချင်းဖလှယ်နေဟန် ဖန်တီးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ထိုပုံများထဲမှ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုင်ရိုမြို့ မှ ဆွန်နီမွတ်ဆလင် ဘာသာရေးကျောင်းမှ ထင်
ရှားသည့် ဗလီဆရာကြီး ရှိတ်အာမက်အယ်တာယက်ဘ် အား နမ်းရှုံ့ နေပုံ အတွက် ကန့် ကွက်မှုဝေဖန်မှု
တွေ အပြင်းထန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါပိုစတာပုံအား ဘီနစ်တန် ကုမ္မဏီ၏အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် တစ်နေလုံးတင်ထားခဲ့ သော်လည်း
ဗာတီကန် မှ ကန့် ကွက်မှုအပြီးနောက်တစ်နာရီအကြာတွင် ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုနှစ်အစောပိုင်းအတွင်းက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအနေဖြင့် အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် လူနည်းစု
များအား ပိုမိုအကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုအပြီးနောက်တွင် အယ်အဇာ ကတော့ 
ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု မတူခြားနားသူများဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများအား ရပ်စဲခဲ့ ပါတယ်...
Mocked-up: Germany's chancellor Angela Merkel inaclinch with French president Nicolas Sarkozy
ရန်သူတော်အချင်း ချစ်ကြည်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပေမဲ့ ...မဖွယ်မရာအချစ်မျိူးတော့ မဟုတ်စေချင်...
Friendly: This image of Palestian leader Mahmoud Abbas and Israeli prime minister Benjamin Netanyahu kissing will no doubt upset some people in the Middle East
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ဗလီဆရာကြီးတို့ ရဲ့ ပုံများတော့ ၎င်းတို့ ၏လှုံ့ ဆော်မှုတွင်ပါဝင်တော့မည်မဟုတ်
ကြောင်း ဘီနက်တန် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးကတော့ အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါလှုံ့ ဆော်ပိုစတာကြီးများကို မီလန်၊ နယူးယောက်၊ ပဲရစ်၊ တဲလ်အဗစ်နှင့် ရောမ မြို့ များတွင် ဖြန့် 
ကျက်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ဗာတီကန်အနီးမှ အငြင်းပွားကန့် ကွက်ဖွယ်ရာပုံရိပ်ကြီးကိုတော့ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ပါ
နည်းပညာအရပြုပြင်ဖန်တီးထားသည့်အဆိုပါပုံရိပ်ဟာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများ၏ စိတ်ခံစားမှုများအား
နှောက်ယှက်ထိခိုက်ရာရောက်သဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း ဗာတီကန် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဘုန်း
တော်ကြီး ဖက်ဒရီကို လုံဘာဒီ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကို အကြီးအကျယ်မလေးမစားလုပ်ရာပြသနေပါတယ် လို့ လည်း ၎င်းကဆိုခဲ့ ပါ
အဆိုပါ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ် လှုံ့ ဆော်ကြေငြာပုံရိပ်များဟာ ဘီနက်တန်ကုမ္မဏီ၏ လူထုအတွင်းစိမ့် 
၀င်ထိုးဖောက်ရေးဗျူဟာ တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံဆရာ အိုလီဗီယာရို တို့ စ်ကန်နီရဲ့ နာမည်ကျော် ပုံရိပ်များ
ဖြစ်သည့် သေဒါဏ်ကျခံအကျဉ်းသားများ၊ သေလုမြောပါးဖြစ်နေသည် အေ့ ဒ်စ် ရောဂါသည်များ၏ ပုံများ
ဖြင့် လည်း ကြေငြာခဲ့ ဖူးပါတယ်...
ရန်ပွဲတွေရပ်ကာ တစ်နဲ့ တစ်ဦးချစ်ကြပါ...သို့ သော်...
Combating hatred: Benetton hope the controversial images will help create tolerance around the world. This picture shows China's leader Hu Jintao and Barack Obama
နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းရေးရဲ့ သင်္ကေတဟုဆိုချင်ယင်ဖြင့် တစ်ခြားနည်းနဲ့ ပြနိုင်ပါတယ်...
Enemies: North Korean leader Kim Jong-il and Lee Myung-bak, President of South Korea, are unlikely to be keen on this picture
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များအချင်းချင်း နမ်းရှုံ့ နှုတ်ဆက်နေကြသည့် ပုံရိပ်
များမှာ အချင်းချင်းချစ်ကြည်စွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး၊ ရင်ကြားစေ့ ရေး သင်္ကေတအဖြစ် မျှော်လင့် ချက်
ပုံရိပ်အပြင် အပြုသဘောဆောင်သည့် စေ့ ဆော်တိုက်တွန်းချက်အပြင်းစားအဖြစ် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး၊စေ့
စပ်ဖြေရှင်းရေးတို့ အားဖြစ်ပေါ်စေရန်လှုံဆော်ချက်အဖြစ်ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ တည်း ဘီနက်တန်ကဆိုခဲ့ ပါ
၎င်းတို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်ကြေငြာချက်တွင် ထရီဗီဆို အခြေစိုက် အ၀တ်အထည်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္မဏီက
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် မော်လ၀ီဆရာကြီးတို့ ၏ပုံရိပ်အား အသုံးပြုခဲ့ မှုအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်များအနေ
ဖြင့် ထိခိုက်ခံစားမိသလိုဖြစ်စေခဲ့ ရခြင်းအပေါ် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ဝမ်းနည်းပါကြောင်း ပြောကြားခဲ ပါတယ်..
ထို့ ကြောင့် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် ထိုပုံရိပ်အား အများပြည်သူ မြင်ကွင်းမှ အလျင်အမြန်၊ ချက်ခြင်းပင် ပယ်ဖျက်
ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ကမ္ဘာမြေငြိမ်းချမ်းပါစေ....ဒီလိုကြီးနဲ့ တော့ မလုပ်နဲ့ လေကွယ်...
မိသားစုအစဉ်အဆက် ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ သည့် အဆိုပါကုမ္မဏီအားတည်ထောင်သူ၏ သားဖြစ်သူ ဘီနက်တန်
အုပ်စု၏ ဒုတိယဥက္ကဌ ဖြစ်သူအလက်ဇန်ဒရိုဘီနက်တန်ကတော့ "ဒါဟာ မုန်းတီးနာကျည်းမှုတွေမဖြစ်စေဖို့ 
ဆိုလိုပါတယ်...မြောက်အာဖရိကနိုင်ငံများနှင့် ဥရောပတို့ တွင်ဖြစ်ပွားနေသည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကြပ်
အတည်းကာလတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် စိတ်ဓါတ်စွမ်းအားများ ဖြစ်စေနိုင်သည့် သဘောထားတစ်
ရပ်အဖြစ် အားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ ( လှုံ့ ဆော်မှု ) ကိစ္စပါ..." လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်....
Benetton was forced to pull intoahumiliating climbdown today as the clothing company was forced to pull one of its images from its new 'Unhate' campaign.
The Italian firm withdrew the photograph featuring Pope Benedict XVI kissingasenior Egyptian imam on the lips after the Vatican denounced it as an unacceptable provocation.
Benetton had claimed its 'Unhate' campaign, which was launched today, was aimed at fostering tolerance and 'global love' but would have known how much trouble they were likely to stir up.
The campaign's adverts include digitally altered pictures halfadozen world leaders to show them kissing.
President Barack Obama kisses Venezuela's socialist leader Hugo Chavez, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu locks lips with Palestinian President Mahmoud Abbas, and North Korean leader Kim Jong Il also enjoysasmooch with South Korean President Lee Myung-bak.
German Chancellor Angela Merkel and French president Nicolas Sarkozy also take time out from dealing with the financial crisis engulfing Europe to give each otherasmacker.
But it is the shot of His Holiness plantingakiss on Sheik Ahmed el-Tayeb of Cairo's al-Azhar institute, the pre-eminent theological school of Sunni Islam, that has raised the strongest objections.
It been on Benetton's website all day but was pulled about an hour after the Vatican's protest.
A Benetton spokesman confirmed this afternoon that the Pope-imam ad was no longer part of the campaign.
Images were unfurled in Milan, New York, Paris, Tel Aviv and Rome, butalarge banner of the image has been removed fromaspot near the Vatican.
Vatican spokesman the Rev. Federico Lombardi called the ad an 'unacceptable' manipulation of the pope's likeness that offended the religious sentiments of the faithful.
'It showsaserious lack of respect for the Pope,' Lombardi said.
Benetton said the photographs of political and religious leaders kissing were 'symbolic images of reconciliation - withatouch of ironic hope and constructive provocation - to stimulate reflection on how politics, faith and ideas, when they are divergent and mutually opposed, must still lead to dialogue and mediation.'
Inastatement, the Treviso-based manufacturer said: 'We are sorry that the use of an image of the pontiff and the imam should have offended the sensibilities of the faithful in this way. We have decided with immediate effect to withdraw this image from every publication.'
According to the Wall Street Journal, Alessandro Benetton, deputy chairman of Benetton Group SpA and son of the founder of the family-controlled company, said: 'It means not hating.
'Inamoment of darkness, with the financial crisis, what's going on in North African countries, in Athens, this is an attitude we can all embrace that can have positive energy.'
Posted by peter kyaw | at 2:21 AM |
အော်..မိုးယံလိုကောင်တွေထင်ပါ...စိတ်ဓါတ်က ကောင်းပေမယ့်..လုပ်ရပ်တွေက သောက်တစ်လွဲ..